कुवेत पुगेको डेढ महिना नबित्दै जबिन्द्रको मृ:त्यु , परिवार शो’कमा ! – Life Nepali
कुवेत पुगेको डेढ महिना नबित्दै जबिन्द्रको मृ:त्यु , परिवार शो’कमा !
काठमाडौँ। बैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत पुगेका एक नेपालीको मृ*त्यु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका –२, सुकेडाँगी दाङका ३६ वर्षीय जबिन्द्र परियारको त्यहाँ पुगेको डेढ महिना नबित्दै उ’पचारको क्र’ममा ज्या’न गएको हो । परियार गत सेप्टेम्बर २७ तारिखका दिन मरिना थाई रेष्टुरेन्टमा कामका लागि कुवेत पुगेका थिए । दुई दिन मात्रै ड्युटी गरेका उनलाई एक्कासी टा’उको दुखेपछि अक्टोबर २ तारिखमा फर्वानियाको अल सिफा अस्पातालमा पुर्याईएको थियो ।
तर उनको त्यहाँ उ’पचार हुन नसकेपछि एक हप्तामा फर्वानिया अस्पातलमा रिफर गरिएको थियो । अ’स्पतालले जनाए अनुसार उनलाई म’स्तिस्कमा क्ष’यरोग लागेको र लामो समय उपचार गर्दा पनि डा’क्टरले बचाउन नसकेको मृ*तकका भाई शैलेन्द्र परियारले जानकारी दिएका छन् । परियारको शनिबार राती मृ*त्यु भएको हो । उनको घरमा एक छोरा र एक छोरी रहेको बताईएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ; हामी सबै मोबाईल प्रयोग गछौ । मोबाईल फोन प्रयोग गर्ने बानी सबैमा छ । मोबाईल अहिलेको अत्यावश्यक प्रयोग सामाग्री भईसकेको छ । अन्य समयमा मोबाईलको प्रयोग र राती सुत्नुभन्दा अघिको मोबाईल प्रयोगमा भने ध्यान दिनुपर्छ । दिनमा त ठिकै छ तर राती सु’त्नु भन्दा पहिले कम्तीमा पनि एक घण्टा अघि मोबाईलाई आफूबाट टाढा राख्नुपर्छ । यदि यसो गरेनौ भने हामीमा केहि समस्याहरु निम्तीन सक्छन् । सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु मानिसक स्वा’स्थ्यका लागि धेरै हा’निकारक हुने तथ्य बाहिरिएको छ । करिब १ लाख मानिसहरुमा गरिएको सर्वेक्षणपछि उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
राति सुत्नेबेला मोबाइल चलाउनु मानिसक स्वा’स्थ्यका लागि धेरै हा’निकारक हुने पत्ता लगाइएको समाचार संस्था इन्डिपेन्डेन्टले उल्लेख गरेको छ । यसअघि पनि आरामपूर्ण निद्रा पुर्याउन सुत्ने समयमा मोबाइल चलाउनु उचित नहुने अध्ययनले देखाएको थियो । तरपनि अधिकांश मानिसहरु फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु घण्टौँसम्म स्क्रोल गरेर मात्र निदाउने गर्दछन् । यही विषयमा अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरुले अहिले यस्ता मानिसहरुमा तनाव, एक्लोपना, बाइपोलार डिस्अर्डर र व्यक्तित्वमा नकारात्मक असर जस्ता मानसिक रोगहरु देखा पर्ने दाबी गरेका छन् । वास्तवमा मोबाइलको प्रयोगका कारण मानिसहरुले पूरा निद्रा लिन नपाउने हुनाले श’रीरको २४ घण्टे प्रणालीमा अवरोध आउने अध्ययनकर्ताहरुको भनाइ छ ।
युनिभर्सीटी अफ ग्लासगोका प्रोफेसरहरुले प्रकाशन गरेको ‘ल्यान्सेट साइकियाट्री’ अध्ययनमा नै पहिलोपटक यसले शरीरको दैनिक साइकलमा खराब प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैको सर्वेक्षणका क्रममा राति मात्र सक्रिय मानिसहरुकोे नाडीका गतिविधि र आन्तरिक शरीरिक प्रणालीमा आउने अवरोधबारे अनुसन्धान गर्न सात दिनसम्म हातमा एक्सेलोमिटर राखिएको थियो । यसै प्रक्रियापछि अनुसन्धानकर्ताहरुले २५ मध्ये एक जनामा असामान्य मानिसक गतिविधि देखा पर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरी ११ प्रतिशत मानिसहरुमा बाइपोलार डिसअर्डर हुने र ६ प्रतिशत डिप्रेशन र एक्लोपनाको शिकार हुने पनि पत्ता लगाइएको हो ।
यस्ता मानिसहरुमा अनिद्राको समस्या बढी भेटिने हुनाले नै उनीहरु राति सक्रिय हुने गर्छन् । त्यसकारण यिनीहरु मध्य रातमा मोबाइल चलाउने, चिया पकाउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको प्रमुख अध्ययनकर्ता ड्यानिअल स्मिथले बताएका हुन् । उनका अनुसार यस प्रकारका मानसिक रोगबाट बच्न १० बजे सम्मको समयसीमा तोक्न आवश्यक छ । मानिसहरुले त्यसभन्दा पछाडि मोबाइल चलाउनमा रोक लगाए समस्या धेरै कम हुने उनको भनाइ छ । विशेषगरी शहरमा चौबीसै घण्टा बत्तीको मुनि बस्ने मानिसहरुका लागि मोबाइलको अधिक प्रयोगले ग’म्भीर स’मस्या नि’म्त्याउने गरेको पाइन्छ ।
Previous राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमिन वि’वादको फै’सला आज हुँदै !
Next छिटै भाषा र सीप परीक्षा संचालन गर्न मन्त्री बिष्टको जापानी प्रतिनिधिमण्डललाई आग्र